Man United Oo 63.9 milyan oo ginni Kuraadinaysa Angel Di Maria | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man United Oo 63.9 milyan oo ginni Kuraadinaysa Angel Di Maria
Manchester United ayaa jebineysa rikoorka u yaalla suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Britain marka ay 63.9 milyan oo ginni kusoo xerogeliso Angel Di Maria, taasoo ka dhigi doonta inay sannadkaan qarash gareysay 170 milyan oo ginni.
Si kastaba ha ahaatee, Red Devils ayaan weli ka dhammaan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub ee xagaagaan, iyadoo Isbuuc ka harsan yahay xirmashadiisa.
Di Maria ayaa dhameystiri doona heshiiska uu United uga soo biirayo Real Madrid, isagoo 24ka saac ee soo aadan qandaraas shan sanno ah oo uu Isbuucii ku qaadanayo 190 kun oo ginni u saxiixi doona United, wuxuuna noqon doonaa ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee kusoo biira kacdoonka tababare Louis van Gaal ka wado Old Trafford, kacaankaas oo ay kooxda ku noqoneyso kooxdii lacagta ugu badan ku qarash gareysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub sannadkaan.
United ayaa Juan Mata kusoo iibsatay 37.5 milyan oo ginni bishii Janaayo ee sannadkaan, Ander Herrera ayey kasoo bixisay 28.8 milyan oo ginni xagaagaan, si la mid ah Luke Shaw oo ay kula soo wareegtay 27 milyan oo ginni, Marcos Rojo ayaana ugu fadhiya16 milyan oo ginni iyo hadda oo ay Di Maria kula soo wareegeyso 63.9 milyan oo ginni, taasoo ka dhigi doonta inay sannadkaan 2014ka qarash gareysay 173.2 milyan oo ginni.
Di Maria ayaa imaan doona magaalada Manchester si uu tijaabada caafimaadka ugu maro United maanta, Red Devils ayaana isha ku heysa inay ku diiwaan gashato waqtiga kulankeeda horyaalka Barclays Premier League ay Sabtida u safreyso Burnley.
26 sanno jirkaan ayaa loo xiri doonaa maaliyadda nambarka 7aad ee United, waana nambarka ay caanka ku yihiin ciyaartoyda noqday halyeeyada kooxdaan sida George Best, Eric Cantona iyo David Beckham. Nambarkaan ayaana ah mid bannaan ka dib markii uu iska dhigay Antonio Valencia xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Dhanka kale, tababare Van Gaal ayaa la filayaa in uusan weli ka dhammaan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xagaagaan oo xirmi doona Isniinta soo aadan, wuxuuna isha ku hayaa inuu lasoo wareego xiddiga AC Milan Nigel de Jong, oo 29 sanno jir ah, kaasoo lagu qiimeeyo 10 milyan oo ginni. United ayaana sidoo kale dooneysa daafaca lagu qiimeeyo 15 milyan oo ginni ee kooxda Ajax Daley Blind.
Haddii ay labadaas heshiis dhameystirto United Isbuuca ka harsan suuqa kala iibsiba qarash gareynteeda ayaa gaari doonta 200 milyan oo ginni muddo hal sanno ah.